Tun Tun's Photo Diary: 2014
at 12/30/2014 06:57:00 AM Links to this post 1 comment:
at 12/09/2014 08:45:00 AM Links to this post3comments:
စင်ကာပူက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာလလောက်ကစပြီး Orchard road တစ်လမ်းလုံးမှာ Christmas Decoration တွေကို အခုလို မြင်တွေ.နိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်နဲ.တစ်နှစ် အလှဆင်ပုံမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်း Orchard Road က Christmas Decoration ကို ၂၀၀၈ ကတည်းက ဓါတ်ပုံစရိုက်ဖြစ်တာ အခုနှစ်နဲ.ပါဆို ၆နှစ်တင်းတင်းတောင် ပြည့်သွားပါပြီ။
Orchard Road တစ်နေရာထဲမှာပဲ Christmas Decoration ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ အထင်ကရ အဆောက်အဦးတွေတိုင်းမှာ လိုလို Christmas Tree တွေ တွေ.ရတက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Shopping mall တွေမှာပေါ့။ Vivo City တို. Marina Bay Sand တို.မှာလဲ နှစ်တိုင်း Christmas Tree အကြီးကြီးတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ Orchard Road မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုပဲ စုစည်းပြီး ဒီပို.စ်လေးနဲ. Christmas ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
at 12/03/2014 08:02:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Bokeh, Christmas, Food, Night, Singapore